Abaal-marinnada lagu bixin doono xafladda FIFA The Best 2021, musharraxiinta ugu cadcad, xilliga laga daawan doono Geeska Afrika & Wax walba oo aad ugu baahantahay xafladda caawa
Kooxda Barcelona oo xiiseynaysa saxiixa Weeraryahan ka tirsan Liverpool
Macallin Ralf Rangnick oo caddeeyay sababtii uu uga soo tagay Cristiano Ronaldo ciyaartii xalay Man United ay barbarraha la gashay Aston Villa
Qoyska Lionel Messi oo doonaya inuu laacibka Paris Saint-Germain ku laabto Barcelona & Aabbaha dhalay xiddigan oo…
Byare June 10, 2018
(Europe) 10 Juunyo 2018. Waxaan dib u amba qaadi doonaa xubinteenii Saakay iyo Wargeysyada oo inoo socon doona inta uu ka xiramayo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Waxaan si joogta ah idin kugu soo gudbin doonaa wararka Xanta ee ku aadan ciyaartoyda inta uu furan yahay Suuqa.
Xiddiga qadka dhexe ee reer Germany ee naadiga Borussia Dortmund Mario Gotze, 26-jir ayaa meesha ka saari doonin suuro galnimada inuu Liverpool dib kula midoobo tababarihiisii hore ee Jurgen Klopp. (Independent)
Lyon ayaa joojisay heshiiskii ay Nabi Fekir kaga iibineysay Liverpool kaddib markii la wariyay in Reds ay isku dayday inay beeso jaban ku hesho 24-jirka kubbad sameeyaha reer Frace kaddib natiijadii ka soo baxday tijaabooyinkii la marsiyay. (Sunday Mirror)
Liverpool ayaa lagu wadsaa in dalab 15-milyan ka gudbiso 26-jirka reer England ee Shabaqa u ilaaliya naadiga Burnley ee Nick Pope. (Sun on Sunday)
Leicester City ayaa Macallinka Celtic Brendan Rodgers u aragta badelka suuro galka ah ee Claude Puel. (Sun on Sunday) 
Real Madrid ayaa dhaliyaheeda Cristiano Ronaldo u soo bandhigtahy heshiis cusub oo sanadkiiba ku kacaya 28.5milyan oo bound laakiin waxa la arkaa inaysan ku filneyn 33-jirka. (Sunday Express)
Xiddiga garabka kaga ciyaara Stoke City iyo Switzerland Xherdan Shaqiri, 26-jir ayaan dooneyn inuu ka hadlo mustaqbalkiisa isagoona meesha ka saarin inuu u dhaqaaqo Liverpool. (Metro)
Arsenal oo diyaar u ah inay u dhaqaaqdo 22-jirka reer Uruguay ee qadk dhexe ee daafaca kaga ciyaara naadiga Sampdoria Lucas Torreira. (Star on Sunday)
Manchester City ayaa dareenkeeda u weecisay xiddiga qadka dhexe Nice iyo xulka Ivory Coast Jean Michael Seri, 26-jir maadaama ay Napoli diiday inay ka soo dabacdo 60-ka milyan ay ku qiimeysay 26-jirkeeda reer Talyaani Jorginho. (Sunday Mirror)
Manchester United ayaa lala xiriirinayay xiddiga qadka dhexe ee Lazio Sergej Milinkovic-Savic, laakiin 23-jirka reer Serbai ayaa sheegay in koobka adduunka kaddib uu go’aansan doono halka uu ka sii wadan doono waayihiisa ciyaareed. (Mail on Sunday)
Tottenham ayaa ka fikireysa inay u dhaqaaqdo 22-jirka qadka dhexe Aston Villa ee ka mid ahaan jiray 21-jirada Xulka England. (Sky Sports)
Pep Guardiola oo qalbi jab ku riday jamaahiirta kooxda Barcelona kadib markii….
Chiellini oo ka warbixiyay sida uu yahay dareenkiisa kadib ka tagistii Buffon ee kooxda Juventus